११ लाखका ब्रा दुई महिलाले चोरे Kasthamandap Daily
११ लाखका ब्रा दुई महिलाले चोरे
अमेरिकामा हालै दुईजना महिलाले ११ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यका ब्रा चोरेका छन् । क्यालिफोर्नियामा दुईजना महिलाले भिक्टोरिया सेक्रेट फेसन हाउसबाट ११ हजार डलर मूल्यका वक्षकवच चोरी गरे । वक्षकवच चोरी गर्ने ती महिलालाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा २२ वर्षकी ब्लेका थालिया क्विन्तेरो र १९ वर्षकी एन्टाने रहेको बताइएको छ । ती महिलाहरुले भिक्टोरिया सेक्रेटको स्टोरका महिला कर्मचारीलाई पेपर स्प्रे छर्किएर लुटपाट गरेका थिए ।
उनीहरुलाई चोरी गरेर भाग्दै गर्दा पुलिसले पक्रिएको हो । पुलिसले चोरी गरिएका ११ लाखका ब्रा बरामद गरेको छ । दुबै महिलामाथि डकैती तथा अपराधका लागि अश्रु ग्यासको प्रयोग गरी गैरकानूनी रुपमा अश्रुग्यास आफूसँग राखेको समेतको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ ।– एजेन्सी
बढी हयान्डसम भएपछि कारवाहीमा
बढी ह्यान्डसम भएकै कारण चीनमा एक विमानस्थल कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन् । ती प्राविधिक ...
दुनियाकै पहिलो टाटु फेला पर्‍यो
मानिसले आफ्नो शरीरमा कहिलेदेखि टाटु बनाउन थालेको होला ? धेरैको अनुमान हुनसक्छ यहीँ आधुनिक ...
कहाँबाट आए मान्छेका ५४ वटा हात ?
चिसोका कारण जमेर बरफ बनेको नदीमा मानिसको हातका दर्जनौँ टुक्रा फेला परेपछि त्यसले ठूलो रहस्य ...